နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ငယ်ငယ်တုန်းက...
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:37 PM
Rita September 7, 2009 at 12:00 AM
khin oo may September 7, 2009 at 12:29 AM
juli September 7, 2009 at 9:13 AM
တကယ်ဆိုရင် ကလေးတွေကို ခြောက်မပြောသင့်ဘူး..
အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ရှင်းပြသင့်တယ်.. ။
Unknown September 7, 2009 at 9:31 AM
ကိုဘ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းလေးတွေကို သတိတယ ကြံ၂ဖန်၂ရေးတတ်တယ် ဆက်ရေးပါ
NangNyi September 7, 2009 at 12:18 PM
လက်တွေအကြောင်းချည်းပဲများ ရေးတာလား ထင်မိပြန်ပေမယ့် အဲလိုလည်း မဟုတ်ဘူးပဲဗျ
Unknown September 7, 2009 at 1:21 PM
Ko Boyz.....you gave usareminiscent talk of your childhood. I can see how innocent the little boy was. Like Sai Hti Saing's song, it'salost paradise,which you will never get back.
:P September 7, 2009 at 2:49 PM
-နံပါတ်စဉ် (၃)ဖတ်ပြီး စဉ်းစားစရာပေါ်လာတာက
"လက်မနူအောင် ဖင်ပြန်နှိုက်ပြီးတဲ့နောက် လက်နံသွားတဲ့အကြောင်း ကိုဘ ဘယ်လို သိသွားတာလဲ" အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံအောင်ဖြေပါ။
-အဲဒီ(၃)က တို့နဲ့ မူကွဲတယ်..။ တို့က အသုဘကို လက်ညှိုးထိုးရင် လက်နူတယ်လို့ အယူရှိတာ..။ ငယ်ငယ်က အသုဘ ဆင်ထားတဲ့ဖက်ညွှန်ချင်ရင် မေးလေးထိုးပြီး လမ်းညွှန်တာပေါ့။
- အောက်ကနံပါတ်တွေ အားလုံး အတူတူပဲ
- နံပါတ်(၂) လုံးဝမသိခဲ့ဘူး၊ မိုးညှင်းသံဗုဒ္ဓေဘုရားကြီးနဲ့ မနီးလို့လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..။
- နံပါတ်(၁)ကတော့ 14-5-6 နှစ်အရွယ်မှာ ကြယ်ကြွေတာ မြင်ရင် လက်မဝှက်ပြီး လက်သီးဆုတ်ထားရမယ်၊ ညအိပ်တဲ့ထိ လက်သီးဆုတ်ကိုမဖြေရဘူး၊ ညအိပ်ရင် အဲဒီလက်သီးဆုတ်ကိုခေါင်းအုံးအောက်ထားအိပ်ရင် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကို တွေ့ရမယ်တဲ့...။
အဲဒါလည်း မအိပ်ခင် လက်သီးဆုတ်ကိုယောင်ပြီး ဖြေမိတာနဲ့ပဲ မတွေ့လိုက်ရပါဘူး.... ။
Ko Boyz September 7, 2009 at 3:07 PM
ရီတာ - ရယ်ရတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ခင်ဦးမေ - ရယ်ရအောင်လား ငိုရအောင်လားတော့ မသိပါ။ မှတ်မိတာလေးတွေ ချရေးပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြိုး - ကလေးကိုမခြောက်ရဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
မေ - ဆက်ရေးမှာပါ။ လာဖတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နန်းညီ - လက်တွေ အကြောင်းကို အစက နားမလည်ပါဘူး။ မြိုးရှင်းပြမှ သိတော့တယ်။ နောက်ဆို ခြေထောက်တွေ အကြောင်း ရေးပြပါ့မယ်။
ဝဝ- ပျောက်ဆုံးနေသော နိဗ္ဗာန်ဘုံကို ပြန်လည် တမ်းတခြင်းပေါ့ဗျာ။
ဆင်ဆင်- ခွေးချေးပုံပေါ် ထိုင်မိတုန်းက နှိုက်မိတာ ထင်ပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ကို ယောင်ပြီး မဖြေမိရင် အိပ်မက်ထဲ တွေ့တဲ့ တစ်ယောက်က မောင်ကြီး ဟုတ်မဟုတ် သိချင်လိုက်တာ။
Ko Boyz September 7, 2009 at 3:14 PM
အဲဒါကြောင့် ဆင်ဆင်တစ်ယောက် အခု မေးစေ့တွေ နူနေတာ နေမှာ။ (အသုဘကို မေးနဲ့ ငေါ့ ထိုးပြ ပြ နေလို့...။)
:P September 7, 2009 at 3:15 PM
မသိချင်ပါနဲ့တော့လေ.. တို့က ပြီးသွားပါပြီ...(အထက်စီးလေသံဖြင့်)
ကိုဘပဲ လက်သီးဆုတ်လေး ခေါင်းအုံးအောက်ထားအိပ်ပြီး ရှာဖွေလေ ပျောက်ဆုံးလေ... အဲလေ.. ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ လုပ်ပါဦး ...ခွိ..။
:P September 7, 2009 at 3:20 PM
ယောင်ပြီး ကိုယ့်မေးစေ့ကိုယ် ပြန်စမ်းမိသွားတယ်.. ဟားဟား..။
ဘာမှ မနူဘူး.... ကိုလက်နံရဲ့ ..။
jr.lwinoo September 8, 2009 at 7:59 PM
ကိုယ့်ပစ္စည်း မတရားလုယူသွားပါတယ်ဆိုမှ ခြေထောက်ကြားထဲ ဖြတ်ဖို့ အချိန်ရှိသလား ကိုboyz ရေ။
Ko Boyz September 8, 2009 at 10:47 PM
ဂျူနီယာရေ...။ အနုနည်းနဲ့ ခဏ ပြန်တောင်းပြီး လုပ်တာပေါ့။ ငယ်ငယ်က ကိုယ်က အဲလို အကျင့်တွေက ကောင်းကြတာကလား...။